Warshad Roller Conical
Qaabdhismeedka birta birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah: sida ku xusan habka wadista, waxaa loo qaybin karaa xariiqa korantada iyo khadadka duudduuban ee aan awoodda lahayn, sida ku xusan qaabka, waxaa loo qaybin karaa xariiqa rullaluistemadka gudbinta jiifka ah, xariiqa gudbinta rullaluistemadka leexashada iyo leexashada xariiqa duubista. Waxaa sidoo kale si gaar ah loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha si loo buuxiyo shuruudaha dhammaan noocyada macaamiisha. Ballaca gudaha cabbirka cabbirka cabbirka waa 100-2000mm, iwm.
Qoondaynta sariirta Waxa loo qaybin karaa sariirro warqad sameeye ah, sariirro daabacan, sariirro wax lagu daabaco, sariirto dhejis ah oo bariis ah, sariirro birta ah iyo sariirro daabacan oo saliid ah; Marka loo eego qaab-dhismeedka dusha sare, waxaa loo qaybin karaa rullaluistemadka fidsan iyo rullaluistemadka naqshada leh; Marka loo eego maaddada waxaa loo qaybin karaa: sariirrada butyl, sariirrada nitrile, sariirta polyurethane iyo sariirta caagga ah ee silikoon. Sariirtu guud ahaan waxay ka kooban yihiin lakabka caagga ah ee dibadda, lakabka adag ee adag, xudunta birta, qoorta duudduuban iyo hawo-mareenka. Hawlgalkeeda inc ...